Nahoana no voakapoka mafy izao tontolo izao ? | Chaîne d'honnêteté
19/04/2020 19/04/2020 par Lilie RAZAFIARISON
An’ny Tompo ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy (Sal.24.1)
Tompony Izy ka manao izay tiany hatao. Andriamanitra masina sy marina, mankahala fahotana kanefa Andriamanitra Fitiavana. Izany no natiorany.
Ao amin’ny Genesisy 6.8 dia nanenina Izy tamin’ny nanaovany ny olona fa feno faharatsiana loatra ny fisainany koa nodioviny tamin’ny safodrano izao rehetra izao afa-tsy Noa valo mianaka ihany sy ny biby araky ny karazany avy satria Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy (Gen.6.9). Nanao izay rehetra nandidian’ny Tompo azy Noa (Gen.7.5).
Gaga isika raha mamaky fa nodoran’ Andriamanitra tamin’ny afo Sodoma sy Gomora satria nitaraina ny tany fa mavesatra loatra ny fahotany noho ny fiainana vetaveta- sodomita. Ka i Lota mianakavy no novonjeny. Dia mangovitra isika !
Imbetsaka ny Tompo no nanafay tamin’ny areti-mandringana ny Zanak’Israely ka nilaza hoe: ” Raha mihaino tsara ny feon’ny Tompo ka mitandrina ny teniny ianao, dia ho tonga aminao sy hahazo anao ny fitahiana rehetra (Deot.28.1ss). Fa raha tsy mihaino kosa ka tsy mitandrina dia hahatratra anao ny fanozonana rehetra (Deot.28.21ss), anisan’izany ny areti-mandringana. Andriamanitra tsy azo vazivazina. Izay afafin’ny olona no ho jinjainy. Marina izay lazain’ny Tenin’ Andriamanitra !
Hoy ny Filohan’i Chine : Atao mifanaraka amin’ny firehan’ny antoko sinoa ny fanoratana ny Baiboly ampiasaina any Chine ! Noravana ny ankamaroan’ny Fiangonana Kristiana any Chine.
Rariny ve raha hamasinina ao am-piangonana ny homosexuels ka lazaina fa mpivady? Fandavana ankitsirano ny Tenin’ Andriamanitra no ataon’ny fiangonana any Eoropa, Angletera ary Etazonia. Manenika ny tany ny faharatsiana amin’ ny endrika maro samy hafa. Tsy mahagaga raha miseho ny kapok’ Andriamanitra.
Efa nomen’ny Ray antsika ny Zananilahy tokana ho Zanak’ondry natao sorona hamonjy sy hamela heloka. Efa nalefany ny Fanahiny hanome antsika hery handavantsika ny ratsy sy handehanantsika araky ny fahamarinany, koa andao hifona, hibebaka, hiverina Aminy amin’ny fontsika rehetra fa mamindra fo sy miantra Izy ka hamela heloka sy HANAISOTRA IZAO LOZA IZAO.
Fitiavana Ilay Andriamanitra masina. Tadidio Izany. ” Ary amin’izao sisa izao, hoy Jesoa, AZA MANOTA INTSONY”.
Miovà ka mankahalà ny ratsy.